Vaovao - Tombontsoa sy vidiny fanaovana excavator kely
Tombony kely sy tombony amin'ny excavator kely indrindra
Ny taonina ankapobeny an'ny mini-excavatorambanin'ny 2 taonina, ny sakany dia ambanin'ny 1,3 metatra, kely ny vatana ary malefaka ny fihodinana. Fahombiazana avo, fanjifana angovo ambany, fampandehanana manan-tsaina no lalam-pampandrosoana lehibe.
Excavator kely ampifanaraho amin'ny sahan'asa sy ny tombony indrindra:
Excavator kely dia mety amin'ny làlana, fantsona nalevina, fandidiana fototra, zaridaina, fitahirizana rano kely, injeniera sivily kely, tatatra, trano fandraisam-bahiny, fananganana tetezana, fananganana toeram-pitrandrahana ary tontolon'ny asa tery hafa, ary ireo fepetra takiana manokana amin'ny fizahan-toerana.
Maivana ny lanjan'ny ankapobeny, mety tsara ny fitaterana fitaterana, tsy misy tranofiara manokana, azo sintonina mivantana ny fiara tsotra, mihena be ny vidin'ny fampiasana, miaraka amin'izay koa noho ny habetsaky ny habetsahana sy ny fampiasana fitaovana fanodinana, tena mahasoa ny fananganana tranokala tery.
Eto izahay dia maka ny mini-excavator Lipai ho ohatra hampahafantatra ny tombony lehibe amin'ny fampisehoana:
1. Ny rafitra hydraulic dia manangana rafitra paompy fanaraha-maso feno paompy 3 hiantohana ny filalaovana sy ny fampiasana ny herin'ny motera. Ny rafitra hydraulic dia afaka mizara sy mampiasa ara-dalàna ny fikorianan'ny rano, izay manova sy manatsara ny fahombiazan'ny mini-excavator.
2. Izy io dia manana fitaovana reducer moteur tokana, izay afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana solika sy hampiasana ny vidiny rehefa mijanona vetivety ny motera.
3. Ny fampiasana paompy piston miovaova axial miaraka amin'ny fampitana herinaratra dia afaka manova ny tsindry sy ny fikorianan'ny rafitra arakaraka ny enta-mavesatry ny rafitra hydraulic. Izy io dia afaka mitazona ny asan'ny hery mihady avo sy ny fiovam-po haingana, ary mampiasa bebe kokoa ny herin'ny maotera hiasa ary manatsara be ny fahombiazan'ny asa.
4. Ny motera dia misy fitaovana flameout vonjy maika, izay afaka mandeha ho azy eo ho eo rehefa mihena tsy ara-dalàna ny tsindry solika, mba hialana amin'ny fahasimbana ateraky ny fihinanana solika tafahoatra na ny fanaovana tsinontsinona ny mpamily.
5, ny fampiasana ny rafitra hydraulic hydraulic "pressure compensated CLSS" sy ny teknolojia fandefasana fihetsiketsehana dia azo aorina amin'ny fikasan'ny mpamily hahatratra ny fandidiana marina, hiasa tsara kokoa.
6, ny fihodinan'ny tanilless dia afaka mamita ny fihodinan'ny 360 ° mora foana amin'ny tontolo tery, mahay mampifanaraka tsara, miasa azo antoka kokoa.
7. Ny fampiharana ny teknolojia microcomputer CPU manan-tsaina dia afaka manara-maso ny fiasan'ny fiara amin'ny fotoana rehetra, manaitra ny lesoka, mahatsapa ny fifandraisan'ny masinin'olombelona ary manatsara ny fikojakojana sy ny fahombiazan'ny asa.
8, ny fitaovana fanonerana faneriterena an-tsakany sy an-davany, raha toa ka mihetsika ny excavator raha tsy mifanelingelina ny singa mpanatanteraka, manatsara ny fahombiazan'ny asa, mampihena ny fotoana fiasana.
9. Ny rafi-pandrefesana enta-mavesatra dia afaka manome ny fikorianan'ny actuator araka ny zoro ny tahony. Rehefa tsy mandeha ny rafitra, ny famindrana ny paompy lehibe dia azo ahena kely, izay afaka mampihena tsara ny fanjifana solika.
10, mifanaraka amin'ny firafitry ny injenieran'olombelona, ​​ny tabataba ambany, ny hovitrovitra ambany, dia afaka mampihena ny havizanan'ny fiara, manatsara ny fahombiazan'ny asa.